Maurice de Hond anowana iyo imwe nehafu metres kutonga nonsense (vhidhiyo): Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 22 May 2020	• 13 Comments
Mumaminetsi makumi matatu anotevera, tarisa paMaurice de Hond, murume ari paseri pesarudzo huru dzenyika dzatinogona "kuvimba zvizere". De Hond awona kuti dzimwe dzidzo dzinoratidza kuti kutonga kwemamita imwe chete nehafu hazvina musoro uye kuti coronavirus inowanzopararira kana mhepo isina kunaka.
Chokwadi, Maurice ane chokwadi chakasimba pamusoro pekuvapo kwehutachiona uye kuburikidza newebhusaiti revitive.nu isu tinowana runhare kuzadza yako nhoroondo nezve kana iwe uine hutachiona uye uye zviratidzo zvipi zvaunazvo. Muchokwadi, iyo yatove nzira yakangwara yekuenda kumaapps ayo anozofanirwa kutitarisisa.
Ehe, pano pane saiti isu tinowanzo taura nezve kupikiswa kwakadzora uye kuzivikanwa kweiyo nhamba makumi matatu neshanu inoshandiswa neFreemasonry kuratidza kuti vari kutonga. Ini handivimbe neMaurice de Hond, neye yenyika yake vhoti uye vhidhiyo yemaminitsi makumi matatu nematatu, yemamita imwe chete.
Chatinoziva ndechekuti yakasakara senzira yekuenda kuRoma, kuti nguva dzose zvakanaka kuronga kushoropodzwa kwenyika iwe pachako. Kana iwe ukasimudzira vanhu panguva imwechete kuti vazadze yavo yehutano data panguva yekushoropodzwa uku, unotova nevanhu ivavo muwebhu rako. Nenguva isipi kurodha maapulo uye Maurice anogona kutarisisa "kupararira kwe coronavirus"
Pasinei nekushoropodzwa kwake, Maurice de Hond anokurudzira kuti iwe uite chikamu chekutarisisa uye kukugadzirira iwe zvirongwa zvikuru zve data
Wese munhu anogona kuona pamachira avo kuti iyi imwe nehafu mamita munharaunda ine humidity uye kuti tiri kunyengedzwa pamwero wakakura. Wese munhu intuitively anonzwa kuti kune zvakawanda kumashure kwemamita nehafu. In ichi chinyorwa Ini ndinosimbisa (neufakazi hwekuti) kuti imwe nehafu mamita inodiwa kuti gonesa kuverenga nekunyora mashandiro eDNA / RNA yako. Wese munhu saka anofanira kuchengeta yakaringana nzvimbo kune izvi. Iyo daro inobatsira uye inodikanwa mu "internet yezvinhu" umo munhu achagadzira 1 yezvinhu.
Tinofanira kusimuka kubva kuKrimson Maurice de Hond tichibva ku "smart Lockdown" kuenda ku "smart kubuda". Izvo zvese zvinonzwika zvakanaka uye hapana kana chinhu chaicho chingataurwa, asi ini handina kumbovimba De Hond nehuwandu hwake uye handivimbe nehuwandu hwehurumende chero zvakadaro. Ndiye paranoid here? Ehe, ita iyo kusagadzikana kune hutano.
Nezvangu nezvangu, hatifanire kuenda kunobudirira kubuda, asi kurangwa kwoutsinye kwehurumende inoreva nhema inofanirwa kukurumidza kuburuka uye kutsiviwa nevamiriri vevanhu vanopihwa vanhu. Makurukota akasarudzwa kuburikidza nehutongi hwakananga vanopika mhiko kuvanhu kune korona.
Isu tinofanirwa kumira kugunun'una kuhurumende nekuti tiri kupa iyo hurumende mhosva. Maurice de Hond anoratidza kuremekedza uye kuonga kuna Mark Rutte uye kwemakore akawanda akaiswa pasi semurume akabvumidzwa kutengesa rusununguko rwematongerwo enyika rwe demus democracy kuburikidza ne "sarudzo" yake. Nzira chete yekubuda mune iyi mamiriro ndeyekuita neiyi chinyorwa-uye-kunyengedzera kabhoni yakaoma uye usavapa chero zvikwereti zvekare. Kwete kubuda kwakangwara, asi shanduko!
Usakwiridzirwa mumambure anotevera ekudzivirira; imwe inosimudzira yakaipisisa yetariro yekushandurwa, iwe uchisundirwa kune iyo 'kuyera ndiko kuziva' pfungwa. Sarudza iyo yakaoma uye yakajeka shanduko inova yakakosha, semuenzaniso, kudzivirira mutemo wekudzivirira wekubvisa uye kubvisa mita imwe nehafu yekusagadzikana. Enda ku www.dvd.nl
Ink yekupinda sosi: wikipedia.org, revitive.nu, ydc.nl
Nyika yekuvhotera vanhu 900 uye vanoidana iyo inomiririra kuti isundudzire corona apps (Refresh)
Coronavirus kukiya: mutemo wekurumidziro, bumbiro uye kodzero yakakosha, izvo zvaunofanirwa kuziva, zvaunogona kuita (izvo zve emergency emergency hazvisi pamutemo)
Tags: imwe nehafu, coffee, coronavirus, de, mbudo, Featured, Hond, intelligente, lockdown, Maurice, mita, tsvakurudzo, sangano, ngwara, Video, weltrschmertz
22 May 2020 pa 11: 46
Hongu ipapo iwe une imwe imwe, imwe kubva kubhu uye inogara yakasvibirira yekutengesa kutaura. Paunonzwa ivo vachitaura, sekunge ivo vane 'huchenjeri' hwese mumaoko avo. Ivo vanogona kutarisa media kunyarara kwemakore mashoma kana kungosiya zvachose uye kutora yako 'Corona' newe. Zvinotyisa uye ingoramba uchizununguka.
Vanhu vanosaina chikumbiro Izvozvi! https://www.fvvd.nl
22 May 2020 pa 12: 08
Zvingave zvakadaro, asi isu tingadai takadzivirira huwandu hwerufu makumi matatu neshanu dai takatora matanho acho. 😷
ps: MuAmerican kurovedza muviri kunodaidzwa kuti C rimson C ontagion  ingangove iri Suske en Wiske zita.
22 May 2020 pa 12: 26
Ehe, ehe, iwe zvakare unotanga kuvhara zvese zviri mumamiriro ekudzikisira kusununguka kwekutaura. Kungotamba.
Huye, hazvishamise kana vanhu vakura vane zvinyunyuto zvemuviri uye kazhinji kushaya hutano, chikafu chakagadzirira, vanofa mudzimba dzinochengetwa vakwegura. Vachembera vanogara pamwe chete uye pedyo nepedyo uye nekudaro vanotapurirana mumwe nemumwe nefuru. Hurumende yakundikana, vakweguru havaifanira kunge vakachengetwa pamwe chete. Izvi zvine musoro uye ndinotofanira kurangwa sezvazviri kwandiri. Kune kuchine mapurisa akaomarara uye vachuchisi avo vanozosunga vatenzi vavo uye / kana maneja edzimba dzekuritaya / RIVM nezvimwe. Zvirokwazvo kwete. Sezvineiwo isu tinogara mune 'yakasununguka' nyika iri 'bumbiro remutemo'.
22 May 2020 pa 14: 31
zviri nyore kutaura neSunny kana tikangoita zviyero zvekuverenga zvese AOW uye pension zvisungo, kushomeka kunomuka uye hatigone kuvimbisa mashandiro emangwana. Mushure mezvose, hurumende iri kuona zviri mberi uye nekuwedzera, iyo yeCovid misasa yemisasa chinhu chinodiwa chisina kusimba pasina kuwedzera purse.
Heano mamwe 👃
23 May 2020 pa 11: 06
Mhinduro yakawanikwawo kune ayo matambudziko epension.
"Sisitimu nyowani ikozvino iri patafura inofanira kumisa nhaurirano pamusoro pemamiriro akashata emari yepension, nekuda kwekuti ivo vatadza kuzadzisa zvayakavimbisa kubva kunhengo dzayo. Hazvichazove zvakare kudikanwa kuti tigare tichikurukurirana nezve 'mainarial rate rate' kana kuti kana kwete kana kuderedza mapension. "
Mune mamwe mazwi: hapasisina vimbiso pane pension yako uye kunyangwe mari yacho ikazvinyudza, havafanirwe kuzvidavirira. Mushure mezvose, yaive yakonzerwa nekushanduka kwemari pamusika wekutengesa.
22 May 2020 pa 12: 10
22 May 2020 pa 12: 18
Kat, Vogel, und so weiter iwe unovasarudza neimwe nzira kubva kune iwo khazars misoro. Iva nemhino iyo….
22 May 2020 pa 20: 12
Iwe unoreva, mhino ye (Gerrit) Zalm yakakuratidza nzira yekubvisa bhangi nekuisa bhajari nevanhu 😉
23 May 2020 pa 00: 15
Ndizvozvo, asi ndinofanira kubvuma kwavari ivo vanotamba vese vari mapurovhinzi zvakanaka mumutambo weHegelian. Nguva nenguva zvakare, avhareji Madurodam mugari inoridzwa, kuveurwa mhanza uye inotumirwa mu tsanga negwaro, kana yaive musungo wekudhara?
Haisi yakanaka theatre uye ndeye mahara ... ooh, iyo (yakagadziriswa) account haiteveri zvakadaro😷
23 May 2020 pa 11: 38
Handivape makorokoto. Havaite izvozvo nechero
vanhu vasiri veKirabhu yavo vanogona / kuva Vanokwikwidza .. Ah, Vakatofanotaura nezvekutanga furuwenza, pamwe kurongeka iri izwi riri nani. Vari sei clairvoyant uye inokosha. Chengetai varanda vakamiswa uye vavhiringidzika, Mota yavo. Vari kunyatsobva riini. Zvirinani nezuro pane nhasi.
Saina chikumbiro izvozvi! Hazvibhadhare chero chinhu.
24 May 2020 pa 10: 39
Horaiti hwese muAfrica
Zviuru zvevanhu vakabatwa neMalariya TB vakafa mumakore achangopfuura.
Asi ikozvino mune mashoma corona kesi, makamu evasungwa akaiswa ... ona pazasi
Vanobata vanhu kubva mumugwagwa uye vanokandwa mumisasa 🙁
Sephus akanyora kuti:
24 May 2020 pa 15: 15
24 May 2020 pa 15: 35
« Vangani vanhu veDutch vangatokwanisa kubhadhara mabhiri avo panguva yeiyo corona dambudziko?
iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza »
Kushanya kwakazara: 2.442.672
Sanne Lejuwaan op iPhone inovanza covid-19 app mune yazvino i-OS 13.5 yekuvandudza